काठमाण्डौ । केपी ओली सरकारले राष्ट्रियसभामा तीनजनालाई सिफारिस गरेको केहि घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सिफारिसलाई सदर गरेकी छिन् ।
आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौड्यालको नाम मनोेनितका लागि सिफारिश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कूलप्रसाद चूडालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपाल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेको उल्लेख छ ।
यसअघि देउवा सरकाले गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम राष्ट्रिय सभा सदस्यको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो निर्णयलाई बदर गर्दै नयाँ सदस्य सिफारिस गरेको हो भने राष्ट्रपतिले पनि तत्कालै मनोनित गरेकी हुन ।
राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै राष्ट्रियसभाले पूर्णता पाएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभामा ५९ जना सांसद रहनेछन् । जसमध्ये ५६ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चुनिएर आएका थिए भने ३ जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित भएका हुन् ।